वाटर थेरापी : बिहान खाली पेट पानी पिउनुका ९ फाइदा - DURBAR TIMES
HomeHealthवाटर थेरापी : बिहान खाली पेट पानी पिउनुका ९ फाइदा
पानी पिउदा पनि धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । अधिकांश रोग पेटमा नै उत्पन्न हुन्छन् त्यसैले खाली पेटमा पानी खानुको अर्थ धेरै छ । यसको प्रमुख फाइदा पेट स्वस्थ बनाउनु हो ।
खाली पेट पानी खादा स्वास्थ्यमा फाइदा हुने तथ्य सर्वप्रथम जापानमा प्रमाणित भएको हो। प्राय जापानीले बिहान उठ्नेवित्तिकै चार गिलास पानी खान्छन् । पानी खाएको आधा घन्टापछि मात्र ब्रेकफास्ट लिन्छन् । यो वाटर थेरापीले उनीहरुलाई सक्रीय र स्वस्थ रहन मद्दत गरिरहेको छ । खाली पेट पानी खाँदा करिब ९० प्रतिशत रोगबाट बच्न सकिन्छ । यसमा पनि मनतातो पानी उपर्युक्त हुन्छ ।
पछिल्लो समय व्यस्त जीवनशैलीका कारण धेरै मानिसहरु आफू रोगको शिकार भएको थाहा नैपाउँदैनन् । स्वस्थ रहनका लागि शरीर र मस्तिष्क उर्जावान् बनाउने खानेकुरा खानुअत्यावश्यक छ । यदि तपाईंमा भुल्ने समस्या छ भने केही यस्ता पेयपदार्थहरु निकैलाभदायी हुन्छन् । जसको सेवनले स्मरणशक्ति समेत बढ्छ । एभोकाडो के हो? …
एजेन्सी | कतिपय उपभोग्य वस्तुमा निहित स्वस्थ्यकर तत्वलाई सम्झेर हामी त्यसलाईप्रयोग गरिरहेका हुन्छौं । स्वस्थ्यकर तत्वमात्र हैन यी वस्तुको प्रयोग गरिनेमौसमलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । उपयुक्त समयमा उपभोग नगर्दा स्वस्थ्यकर वस्तु नै विष समान हुने भएकोले पनि वस्तुकोउपभोग मौसमलाई सुहाउँदो र…
एभोकाडो के हो? तौल नियन्त्रणदेखी छालाको सुन्दरता का लागि
एजेन्सी | एभोकाडो अर्थात् घ्यूफलमा भिटामिन, क्याल्सियम, आइरन, एन्टी–अक्सीडेन्ट रएन्टी–भाइरल गुणहरू भरपूर हुन्छन् । यसको नियमित सेवनले तौल नियन्त्रणमा रहन्छ र क्यान्सर जस्तो गम्भीर रोग पनि लाग्नपाउँदैन । अनि छालाको सुन्दरता पनि यसले कायम गर्छ । यसका अन्य फाइदा यसप्रकार छन् : एभोकाडोमा भएका गुणहर…
हिजो आज मानिसहरु चलन चल्तिका विषयमा बुझ्न खोज्ने अथवा रित परिवर्तन गर्न चाहनेव्यक्तिहरु ति तमाम सन्स्क्रिती माथि आफ्नो आवश्यकता अनुरूप व्याख्या र तर्क गर्नेगरेका छन्। यस्तै केही विषय मध्य अण्डा शाकाहारी हो या मांशाहारी हो भन्ने विषयमापनि निकै बहस हुने गरेको भेटिन्छ। अझ नेटिजन (ईन्टरनेट सन्जालका ज…
Previous articleनवनियुक्त तीन राजदूतबाट शपथ ग्रहण
Next articleट्राफिकले काटेको चिटको पैसा तिर्न बैंक जानु नपर्ने